2011 New Year Resolution (သို့) ဓမ္မနုပဿနာ…ဆီသို့ သာ – Thabarwa Centre
2011 New Year Resolution (သို့) ဓမ္မနုပဿနာ…ဆီသို့ သာ
23 October, 2012 Soe Win Htut	တရားဆောင်းပါးများ
Jan 13, ’11 4:29 AM
ကိုဝိမုတ္တိ (www.vimuttisukha.com/) က ကျွန်တော် ရဲ့ နှစ်သစ် 2011 New Year Resolution (နှစ်သစ်ဆုံးဖြတ်ချက်) နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဇန်န၀ါရီ ၄ရက် လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ တဂ်(TAG) ထားခဲ့ပါတယ်။
ကိုဝိမုတ္တိက တချို့က နှစ်သစ်မှာ ဘာတွေ ဘယ်လိုလုပ်ဖို့ စီမံထားတယ် ….သူတို့ရှေ့ ဆက်လုပ်မည့် အစီအစဉ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာမှုတွေ ပြုလုပ်ကြတယ်ပြောပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း ကိုဝိမုတ္တိဆီ 2011 New Year Resolution (နှစ်သစ်ဆုံးဖြတ်ချက်) ကို ပြန်ရေးဖို့ရာ နေမကောင်းနေသည်သဖြင့် တော်တော်နဲ့ ရေးမထွက်ခဲ့ပါချေ။
၁) နှစ်သစ်တိုင်းအတွက် အလိုအပ်ဆုံး
တကယ်တမ်းပြောရရင်တော့ ယခု နှစ်သစ် 2011 အတွက်သာ မကပဲ …..နှစ်သစ်တိုင်းအတွက်…(ဘ၀တစ်ခုလုံးအတွက်) ကျွန်ုပ်မှာ အရေးကြီးဆုံးသော သန္နိဋ္ဌာန်..ဆုံးဖြတ်ချက်-အစီအစဉ် (Every New Year Resolution) က ရှိနေနှင့်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ 2011 နှစ်ဦး နေမကောင်းဖြစ်စဉ် ပေါ်လာသည့်အသိက ကျွန်ုပ်၏ ရည်မှန်းချက်ကို ပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့ အတော်လိုနေသေးကြောင်း ……တတ်နိုင်သမျှ ပိုမိုကြိုးစားဖို့ လိုအပ်နေသေးကြောင်း နားလည်လာမိပါသည်။
၂) သန္နိဌါန်များ…..ကျရှုံးမှုများ နှင့် ….အောင်မြင်မှုများ
ကျွန်ုပ်တို့သည် ငယ်ရွယ်စဉ်ကျောင်းသား ဘ၀ကတည်း က ဒီနှစ်ဘာဖြစ်အောင်လုပ်မည်….နောက် နှစ်ဘာလုပ်မည်… စသည်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ စီစဉ် စိတ်ကူးလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြဖူးလေသည်။ ထို့နောက် စီးပွားရှာသောအရွယ် တွင်လည်းကောင်း၊ လူမှုရေးလုပ်ဆောင်မှုများတွင်လည်းကောင်း တခြားသောကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းကောင်း သန္နိဋ္ဌာန်များ …အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲ ကာ လုပ်ဆောင်ကြလေသည်။
မဆုံးနိုင်သော အစီအစဉ် သန္နိဋ္ဌာန်များ …ချကာ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကျရှုံးသူများ ရှိသလို ….အောင်မြင်သွားကြသူများလည်း ရှိကြပါမည်။
ငါးတွေလည်းကူးခတ်ရင်း…ငှက်တွေလည်း ပျံသန်းရင်း သေဆုံးသွားကြသလို…
လူတွေလည်း ကြံရင်း ဖန်ရင်း….မိမိယုံကြည်ရာ ကို ရည်မှန်းချက် သန္နိဋ္ဌာန် အတိုင်း အဖန်ဖန်ကြိုးစားရင်း…. သေဆုံးသွားကြပါသည်။
..သန္နိဋ္ဌာန်အတိုင်း အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သူများလည်း ဘ၀အတွက်အလုပ်များပြီးဆုံးသွားသည် မရှိပဲ သန္နိဋ္ဌာန်နောက်တစ်ခု တစ်ခုပြီးတစ်ခု..ချမှတ်ကာ…လုပ်ဆောင်လိုက်…အဆင်ပြေလိုက်…နှင့် အဟုတ်ကြီး ဟုတ်နေသူများလည်း ရှိနေပေသည်။
၃) ထားဖူးခဲ့သော၊ ပျက်ပြယ်ခဲ့ဖူးသော ….
ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ခုခုဖြစ်ဖို့၊ တစ်ဦးဦးဖြစ်ဖို့၊ ဘာဖြစ်ဖို့၊ ညာဖြစ်ဖို့၊ ဘယ်လိုလုပ်ဖို့၊ ညာလိုလုပ်ဖို့ စသည်ဖြင့် ရည်မှန်းချက်များ သန္နိဋ္ဌာန်များ ချဖူး၊…ထားဖူး၊ လုပ်ဖူး၊ ရယူဖူး၊ ပျက်ပြယ်ခဲ့ဖူးလေပြီး ဘာသာရေးသမားဖြစ်စေ၊ စီးပွားရေးသမားပဲဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်စေ၊ လူမှုရေးသမားဖြစ်စေ၊ သုတေသနသမားဖြစ်စေ၊ ဒုစရိုက်သမားဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဟာ ရည်မှန်းချက်ထား၍ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း အင်တိုက်အားတိုက် ကိုယ်ရောစိတ်ပါ လုပ်ဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ လေ့လာဖူး၊ နာကြားဖူး၊ သင်ယူခဲ့ဖူးကြပါသည်။
၄) မကြားဖူးသေးသော ရည်မှန်းချက် (အဟုတ်ထင်ငြိတွယ်မှု ကင်းစေဖို့သာ)
ဒါပေမယ့် ဘာသာရေးသမားဖြစ်စေ၊ စီးပွားရေးသမားပဲဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်စေ၊ လူမှုရေးသမားဖြစ်စေ၊ ပညာရေး သုတေသနသမားဖြစ်စေ၊ …… (တစ်ခုခုဖြစ်ဖို့၊ တစ်ဦးဦးဖြစ်ဖို့၊ ဘာဖြစ်ဖို့၊ ညာဖြစ်ဖို့ ) ဆိုသည့် သန္နိဋ္ဌာန် ရည်မှန်းချက်များ ကိုလည်းကောင်း၊ ထိုရည်မှန်းချက်များ လုပ်ဆောင်နေမှုကိုလည်းကောင်း၊ ထိုထိုရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်မှု(သို့) ကျရှုံးမှုကိုလည်းကောင်း အဟုတ်ထင်ငြိတွယ်မှု ကင်းကင်းနှင့် လုပ်ရုံသက်သက်လုပ်တတ်ဖို့ သည်သာ တကယ့်ကို အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်း ကိုတော့ ကျွန်ုပ်တို့ ကြားတောင်မကြားဖူးကြပါချေ။
အနုပညာနယ်၊ စာပေနယ်၊ စီးပွားရေးနယ်၊ လူမှုရေးနယ်၊ နိုင်ငံရေးနယ် စသည့် ဟိုအပူ၊ ဒီအပူ၊ ဟိုအာရုံ၊ ဒီအာရုံ အာရုံနယ်ပယ်များတွင် မနေပဲ တရားအာရုံသို့ တချိန်ချိန်ပြောင်းသင့်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ဓမ္မဘလော့ဂါများ သဘောပေါက်ကြပါသည်။
(တရားအာရုံဆိုတော့လည်း ကျွန်ုပ်တို့ သည် နားလည်သည်မှာ တည်ငြိမ်နေသောတစ်ခုခု (သို့) လှုပ်ရှားနေသောတစ်ခုခု …ဝေဒနာဖြစ်စေ၊ ထွက်သက်ဝင်သက်ဖြစ်စေ၊ ပိန်မှုဖောင်းမှုဖြစ်စေ၊ အလင်းနိမိတ်ဖြစ်စေ၊ စကားလုံးဖြစ်စေ၊ အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်စေ စသည့် အာရုံတစ်ခုခုတွင် စိတ်ကို စူးစိုက်နေနိုင်ရန်ကြိုးစားခြင်းလောက်ဖြင့်သာ နားလည်မှု လမ်းဆုံးသွားပါသည်။)
ဒါ့ကြောင့် ကိုဝိရေ ..ကျွန်တော်အတွက်တော့ –
စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေးစသည့် ဟိုအပူ၊ ဒီအပူ၊ ဟိုအာရုံ၊ ဒီအာရုံ အာရုံများကို ရော……
တရားအာရုံဆိုသည့် တည်ငြိမ်နေသောတစ်ခုခု (သို့) လှုပ်ရှားနေသောတစ်ခုခု …ဝေဒနာဖြစ်စေ၊ ထွက်သက်ဝင်သက်ဖြစ်စေ၊ ပိန်မှုဖောင်းမှုဖြစ်စေ၊ အလင်းနိမိတ်၊ စကားလုံးများ ၊ အသံများကို ဖြစ်စေ၊ တွေ့ကြုံရသမျှ အကောင်းအဆိုးများကို ဖြစ်စေ…အဟုတ်ထင် ငြိတွယ်မှု ကင်းရေးကိုသာ ကျွန်တော် ရဲ့ New year Resolution အဖြစ် ထားရှိကြောင်းပါ။
၅) မပြောင်းလဲသော ပြောင်းလဲခြင်းများလား
ကျွန်ုပ်တို့ ဓမ္မ ဘလော့ဂါများအပါအ၀င် ၊ spiritual ကို အလေးအနက်ထားသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစု၏ ကြီးမားသော Life Resolution မှာ ဦးကျော်ဟိန်းကဲ့သို့ အချိန်တစ်ခုရောက်လျှင် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေးစသည့် ဟိုအပူ၊ ဒီအပူ၊ ဟိုအာရုံ၊ ဒီအာရုံ အာရုံများမှ တရားအာရုံဆိုသည့် ဘုန်းကြီးဘ၀၊ သီလရှင်ဘ၀ (သို့) သူတော်စင်ဘ၀..ယောဂီတစ်ယောက်ဘ၀ အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပစ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃-၄ လလောက်ကထင်သည်။ ဦးကျော်ဟိန်း(ရဟန်းဘ၀ဖြင့်) မှ ဆရာတော်တစ်ပါးအား သူ၏ ရောဂါဝေဒနာ RESULT နှင့် ပတ်သက်ပြီး ပူပန်နေမိသဖြင့် သူ၏အားထုတ်သော တရား လမ်း မှန် မမှန် လာရောက်မေးမြန်းသည်ကို နာကြားရလေသည်။ မိမိ၏ life Resolution ကို အများပြည်သူကို ချပြကာ စံနမူနာပြ လုပ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့သော မင်းသားကြီးဦးကျော်ဟိန်း သည်ပင် တကယ့်အရေးမှာ မရေရာဆဲပါကလား။ လို့ ကျွန်တော် စဉ်းစားမိပါသည်။
မိမိ တွေ့ကြုံရသမျှ …..
ဒါတွေက အဓိက မဟုတ်ပဲ ….ဒါတွေကို တကယ့်အနှစ်သာရပဲဆိုပြီး ……
အဟုတ်ထင်ငြိတွယ်နေမှု ကင်းဖို့ အရေးသည်သာ ကျွန်ုပ်တို့ ထားသင့်သော 2011 အတွက် resolution ဖြစ်သလို နှစ်သစ်တိုင်းအတွက် spiritual resolution ဖြစ်ပါသည်။
ဒီလိုပြောလို့ လောကီ ရည်မှန်းချက်တွေ ဖျက်ပစ်ရမယ်…လို့ မဆိုလိုပါဘူးခင်ဗျား။
ကျွန်ုပ်တို့ လူသားများအတွက် တခြားသော စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး သန္နိဌါန်များ၊ ရည်မှန်းချက်များ ထားရှိရပါမယ်။
ဒါတွေဟာ ဘ၀အတွက် သုံးရုံသက်သက်သက်ရမည့် ဟာတွေ ပါ.. ။
အဟုတ်ထင်ကာ တွယ်နေရမှာမဟုတ်သလို၊ ပစ်ပယ်ရမှာလည်း မဟုတ်ပါ။
သို့ရာတွင် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး ရည်မှန်းချက်များ အပေါ်မှာ လည်းကောင်း၊ ရရှိလာမယ့် … ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် အရှုံးအမြတ် အပေါ်တွင်လည်းကောင်း …….အဟုတ်ထင်ငြိတွယ်မှုကင်းရေး (သို့)…..ရည်မှန်းချက်များကို (တစ်ဦးဦး-တစ်ခုခု)ကို ကိုယ်စားမပြုပဲ လုပ်ရုံသက်သက် လုပ်တတ်ဖို့ သည်သာ အဓိက အရေးကြီးဆုံးအဖြစ် ဖြစ်ကြောင်း ကို တော့ နားလည် သိရှိသူ အလွန်ရှားမည်ထင်ပါသည်။
ထိုရည်မှန်းချက်မျိုး ကို ထားရှိဖို့နေနေသာသာ ဘာကြောင့် ထားရတယ်ဆိုတာ ကြားဖူးဖို့ …နားလည်ဖို့ပင် ခက်မည်ထင်ပါသည်။
ဒီနေရာမှာ ဒီရည်မှန်းချက်ကို ဘာကြောင့် ထားရတယ်ဆိုတာ မပြောတော့ပါ။
၆) ဘာပြောင်းလဲချင်တာလဲ ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ..
ကျွန်ုပ်တို့ ဘာဖြစ်ဖို့ …ညာဖြစ်ဖို့၊
ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကနေ …ညာလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ဖို့ ၊
တစ်ခုခုလုပ်နေတဲ့ဘ၀ကနေ….အနားယူတော့ဖို့၊ (သို့) ဘာမှမလုပ်ရာကနေ…တစ်ခုခုလုပ်ဖို့၊ ဘယ်လိုချမ်းသာမှုကနေ….ညာလိုချမ်းသာမှုဖြစ်ဖို့ …
ဘယ်လို ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေကနေ ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ဖို့ စတာတွေကို အဓိက ရည်မှန်းချက်ထား လုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးသလို ရည်မှန်းချက်များပြည့်ဝခဲ့ဖူး…(သို့) ရည်မှန်းချက်များပျက်ပြယ် စိတ်ညစ်ခဲ့ဖူးလေပြီ။
……သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့ ရည်မှန်းချက်ပြည့်ဝမှုများကိုလည်း ယခုတိုင် အဟုတ်ထင် မက်မောဆဲ၊
ရည်မှန်းချက်များ ပျက်ပြယ်သွားမှာကိုလည်း ယခုတိုင် အဟုတ်ထင် ထိတ်လန့်နေဆဲ။
ဘာဖြစ် ညာဖြစ်ဆိုတဲ့၊ ဘာ ဘ၀ ညာဘ၀ဆိုတဲ့၊ ဒီအခြေအနေ ဟိုအခြေအနေဆိုတဲ့၊ ဘာချမ်းသာ..ညာချမ်းသာဆိုတဲ့ တစ်ခုခုသော ဒီရည်မှန်းချက်တွေ..တနည်းအားဖြင့် ကာယ-၀စီ-မနောနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ခံစားမှုတွေ-ဆင်းရဲ-ချမ်းသာအောင်မြင်မှုတွေကို အဟုတ်ထင်ပြီး ကြိုးစားနေမှု…
-ကာယ- ၀စီ-မနောနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ခံစားမှုတွေ-ဆင်းရဲ-ချမ်းသာအောင်မြင်မှုတွေ….
အဟုတ်ထင်ငြိတွယ်မှု ကင်းကင်း နှင့် လုပ်စရာတွေကို လုပ်ရုံသက်သက် လုပ်တတ်ဖို့ ရည်မှန်းချက်ထားလုပ်ဆာင်ခြင်း တို့ ရဲ့ ဘာကွာခြားသလဲဆိုတာကို
ရည်ရွယ်ချက် ပြောင်းကြည့်သူ ၊ ပြောင်းကြည့်ရန်ကြိုးစားကြည့်သူမှ သာ နားလည်နိုင်ပေမည်။
ကျွန်ုပ်၏ resolution ရည်မှန်းချက်ပြည့်မပြည့်တော့ မသေချာသေးပေမယ့်။ ကျွန်ုပ်ရည်မှန်းချက်ကို နားမလည်သူတချို့တို့ ရှိမှာသေချာနေပေသည်.။
ကျွန်ုပ်၏ ဓမ္မဘလော့ဂါမိတ်ဆွေများအကြေား ကျွန်ုပ်နှင့် ရည်မှန်းချက်တူသူ ရှိမရှိ မသေချာပေမယ့်
ကျွန်ုပ်ရည်မှန်းချက်ကို ဘယ်လိုပြည့်အောင် လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းကိုတော့ သိလိုသူ အလွန်ရှားမှာ သေချာပေသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ…ကျွန်ုပ်ရည်မှန်းချက် 2011 နှစ်သစ်အတွက် resolution လို့ပဲပြောပြော နှစ်သစ်တိုင်းအတွက် life resolution လို့ပဲ ဆိုဆို ဒီ resolution ဟာ ကျွန်ုပ်အတွက် အချိန် အကန့်အသတ်မဲ့ သော တစိုက်မတ်မတ် ကြိုးစားရန်လိုသော (ကျွန်တော့်အတွက်တော့) အကြီးကျယ်ဆုံးသော ရည်မှန်းချက်ပဲ ဖြစ်ပါတော့သည်။
ကျွန်ုပ်၏ 2011 resolution or life resolution ကို နားလည်ရန်အတွက်
သင့်ကို အကူအညီပေးမည့် စကားလုံးတချို့ …
၁) သူတပါး အပြစ်ကို ရှာဖွေ စိစစ်နေမှု ထက်
ကိုယ့်စိတ် ကိုယ်စစ် ဖို့ က ပိုမို အရေးကြီးပါ၏…
ကိုယ့်စိတ် ကိုယ်စစ်ဖို့ထက်.. ပိုမိုအရေးကြီးသည်မှာ..
ကိုယ့်စိတ်၊ သူတပါးစိတ်အဖြစ် ခွဲခြားသတ်မှတ်နေမှု၊
ငါ့စိတ်၊ သူ့စိတ်၊ တစ်ဦးဦးပိုင်စိတ် အဖြစ် အဟုတ်ထင်ငြိတွယ်နေမှု
အထင်မှားနေမှု (အ၀ိဇ္ဇာ-သမုဒယသစ္စာ) ပဲ ဖြစ်နေခြင်း ကို
မမေ့ဖို့ – သတိရနေဖို့ – သတိထားနေဖို့ပါ ….
၂) ဝေဒနာ နဲ့ ငါ မရောဖို့ အရေးကြီးပါ၏.
ကိုယ်နာ သော်လည်း စိတ်မနာ ပဲ နေနိုင်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း –
ကျွန်ုပ် သိနားလည်ခဲ့ပြီး ပါပြီ။
နားလည်ဖို့ ထပ်မံ လိုအပ်နေသည်မှာ ….
ခံစားနေရသောငါ (သို့) မခံစားရသောငါ အဖြစ် ကိုလည်းကောင်း
-တကယ့်အရှိပဲ ဆိုပြီး (တကယ့်အဟုတ်ဆိုပြီး) အထင်မှားနေမှု၊
ပဲ တကယ်ဖြစ်နေတာ ကို မမေ့ဖို့
အမြဲမပြတ် သတိထား-သတိရနေဖို့ ပါ ….
၃) ၀င်လေ-ထွက်လေ (သို့) ပိန်မှု-ဖောင်းမှု စသည်ဖြင့် ရုပ် တစ်ခုခု သည်လည်းကောင်း..
မြင်စိတ်၊ ကြားစိတ်၊ နံစိတ်၊ ကြံတွေးစိတ် စသည့် စိတ် တို့သည်လည်းကောင်း၊
အကောင်းအဆိုး ခံစားချက် ၊ စသည်ဖြင့် ဝေဒနာ တစ်ခုခု တို့သည်လည်းကောင်း ဖြစ်ပြီး ပျက်ပျက်နေသောကြောင့် အတည်ယူလို့ မရပါ။
ဒါကြောင့်….တရားခံက ရုပ်တွေ၊ စိတ်တွေ၊ ဝေဒနာတွေ ဆိုတဲ့ တစ်ခုခုတွေ မဟုတ်ဘဲ..
ဒီ-ရုပ်တွေ၊ စိတ်တွေ၊ ဝေဒနာတွေ၊ တစ်ခုခုတွေ ကို အချိန်တစ်ခုကြာ တကယ် ရှိနေ၊ တကယ်ဖြစ်နေတာ ဟူ၍ အထင်မှားအောင် ဖန်တီးပြုလုပ်နေမှု (အ၀ိဇ္ဇာ၊သင်္ခါရ)ပဲ တကယ့်တရားခံအစစ် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ နှလုံးသားထဲက ခြွင်းချက်မရှိ နားလည်ထောက်ခံ .သွားနိုင်ဖို့ပါ……..
ယခု ဤပို့စ်ကို တဂ်သော ကိုဝိမုတ္တိသုခ နှင့်တကွ မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ နှစ်သစ်မှာ အားလုံးပဲ စိတ်နှလုံး အေးမြကြပါစေ။